Tag: shanduko mitengo | Martech Zone
Tag: shanduko mitengo
Mashandisiro anoita Saiti Yekukurumidza Maiza Ecommerce Shanduko Mitengo
Chitatu, Nyamavhuvhu 5, 2020 Chitatu, Nyamavhuvhu 5, 2020 Douglas Karr
Isu takabatanidza chirongwa chemibairo uye takagadzira akati wandei akasarudzika uye epamusoro ekushambadzira otomatiki kuyerera kwee-commerce mutengi iyo yakawedzera zvakanyanya mari yavo. Sezvatakaramba tichitarisa vashandisi vachiyerera kubva kumaemail kuburikidza nekushandurwa, takaona nyaya dzinoverengeka nekutora kwavo uye chikuva chaive chakanyanya kukanganisa saiti - zvichikanganisa vatengi vavo uye kutyaira mareti ekusiya kumusoro - kunyanya pamafoni mbozha. Nei Peji Yekumhanyisa Nyaya Izvo zvakanaka kuti ushande pakushambadzira
Chipiri, July 16, 2019 Chipiri, July 16, 2019 Dana Roth
Iko hakuna chimwe chinosuwisa kupfuura kuve nemubhadharo wakabhadharwa mushandirapamwe wekufambisa wakaendesa matani emigwagwa kune yako saiti asi zvakakonzera kutendeuka kushoma. Nehurombo, vazhinji vatengesi vedigital vakaona izvi, uye mhinduro yacho yakafanana: gadzirisa yako saiti ine yepamusoro-inoshandura zvemukati. Mukupedzisira, chikamu chakaomesesa kusaunza munhu kumusuwo, kuri kuvapinza mukati. Mushure mekushanda nemazana emasaiti, takawana matipi anotevera
Zvinotendwa neVashambadzi Ndezvepamusoro zvitatu Kubudirira Pakutora Zvinotungamira
Chitatu, Kukadzi 24, 2016 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Ivo vanhu vakuru veFormstack vakaongorora mazana maviri uye epakati-epakati mabhizimusi eUS uye asiri-purofiti kuti vaone uko vashambadzi vari kuenda zvakanaka nezvakaipa nemazano avo ekutungamira echizvarwa. Iyi infographic irinongedzo mune yakazara Iyo State of Lead Capture mu200 mushumo uine mamwe makiyi ekuziva pane anotungamira ekutapa matambudziko uye mazano. Kuwana kwavo kwekutanga, kushambadzira kunoda nzwisiso mukutengesa uko kunovhara, kuri pamusoro pekushoropodza. Sezvineiwo, makambani mazhinji ari kure nekutengesa kubva kushambadziro